Izinhlelo ezihamba phambili ze-P2P ze-Android | Izindaba zamagajethi
Izinhlelo ezihamba phambili ze-P2P ze-Android
Kulezi zinsuku, njengezindlela ezinhle kakhulu zokudlulisa amafayela amabanga amade, Amanethiwekhi we-P2P. Ziningi futhi ziyahlukahluka, kepha kulokhu sizokhuluma kuphela ngezicelo ze-Android.
Eyokuqala yalezi zingosi yi- orTorrent, iklayenti leBit Torrent leWindows ne-Mac eselikhethwe ngabasebenzisi abaningi ngemuva kokwehla kwefayela le- uhlu lwamaseva we-emule asebenzayo. Ukukhanya kwayo, amandla nesivinini sayo kuyenza ingabi nhlobo ubuwula, futhi yethulwe ngomklamo omuhle. Imininingwane yokulanda inqubekela phambili icacile futhi inikeza umuzwa omuhle womsebenzi obushelelezi. Futhi, i-µTorrent inenguqulo ephathekayo, eyenza ibe yinye yezinhlelo ze-P2P eziphelele kakhulu, konke okungaphezu nje kuka-700k wesisindo. Uma unesibindi sokulanda lolu hlelo olusheshayo nolulula, kufanele wazi ukuthi njengamanje sithola inguqulo yalo engu-3.1.26773 itholakala.
Kepha olunye uhlelo luhle kakhulu Vuze, eyayaziwa njenge-Azureus, ngomklamo ongcono futhi ishesha ngokwedlulele futhi inembile ekutholeni amafayela. Ngaphezu kwalokho, lolu hlelo lomthombo ovulekile lunokuqoshwa kwe-DVD, isidlali se-HD nesifundi se-RSS. IVuze ithathwa njengelinye lamathuluzi anamandla kakhulu we-bittorent. Ngalesi sicelo kulula futhi kuyashesha ukusesha, ukulanda nokudlala amafayela wesifufula. Njengamanje siyatholakala inguqulo yayo engu-4.7.0.0.
Uma kukhona umbukiso wakudala futhi othandwa ngokweqiniso, lokho Ares, i-P2P elandwe kakhulu naleyo ekhethwa yizigidi zabantu. Ares inekhathalogi enkulu futhi ikunikeza amandla okuhlola kuqala amafayela ngaphambi kokuwalanda ngokuphelele. Lokhu kwenza kube intandokazi yabasebenzisi.
Ukwaziswa okwengeziwe: Amanethiwekhi we-P2P Ayini?
Isithombe: Materia Geek
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Software » Izinhlelo ezihamba phambili ze-P2P ze-Android
UGabriel Pinzón kusho
Balahlekile endleleni, i-Ares ayinayo inguqulo ye-Android, izinhlelo zokusebenza ezibizwa nge-Ares Plus, i-Ares Online nokunye okunjalo kuvela kwabanye abantu futhi abazixhumi nakunoma iyiphi inethiwekhi ye-p2p noma basebenzise izifufula. Ngakolunye uhlangothi, kukhona inguqulo yeklayenti elibuhlungu le-Android: Frostwire.
Phendula uGabriel Pinzón
FileFort Backup, dala isipele sayo yonke imibhalo, izithombe namafolda omculo kuseva ye-FTP